Wabiga ugu dheer adduunka: muranka u dhexeeya Niil iyo Amazon | Safarka Absolut
Wabiga ugu dheer adduunka malaha ma aha midka aan dhammaanteen ka fikirno marka naloo weydiiyo su’aashaas. Ama, ugu yaraan, ma aha kan keliya. Maxaa yeelay sayniska ma dhammeeyo ogolaashada ku saabsan, xitaa kuma saabsan shuruudaha la raacayo si go'aan looga gaaro.
Xaqiiqdii, haddii aad dhahdo waa webiga adduunka ugu dheer, waad tilmaami lahayd Amazon. Gabi ahaanba khalad ma noqon doontid. Si kastaba ha noqotee, qayb wanaagsan oo khubarada ah, oo ku saleysan astaamo kale, ayaa kuu sheegi lahaa inay tahay Niil. Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah inaan dhammaanteen saxnaan doonno. Waxay kuxirantahay shuruudaha aan isku haleyno.
1 Shuruudaha lagu go’aaminayo kan ugu webiga dheer adduunka
2 Webiga Niil, waa webiga ugu dheer adduunka dherer ahaan
2.1 Harada Victoria
2.2 Biyo-xireenka Aswan
2.3 Magaalada qadiimiga ah ee Meroe
2.4 Dooxada Boqorada
3 Amazon, waa webiga ugu weyn adduunka ee socodka biyaha
3.2 Iquitos, Peruvian Amazon
3.3 Manaus, caasimada Amazonas
3.4 Belém, albaabka laga galo Amazon
Shuruudaha lagu go’aaminayo kan ugu webiga dheer adduunka
A priori, waxay u muuqan kartaa wax fudud in la dhiso cabirka webiga. Waxay ku filnaan laheyd in la qaato barta dhalashadiisa iyo afkeeda oo la cabbiro masaafada. Si kastaba ha noqotee, xitaa ma fududa in la dejiyo xadkaas jireed. jira wabiyada ku soo biira si ay u sameeyaan hal kanaal. Sidaa darteed, way adag tahay in si sax ah loo muujiyo halka uu webigu ka bilowdo.
Intaa waxaa dheer, halka khubarada qaar ay ku tiirsan yihiin shuruudaha dhererka, kuwa kale waxay ku sameeyaan iyagoo eegaya socodkeeda. Taasi waa, mitirka kuyuubikada biyaha ah ee ay ku shubaan badda. Mabda 'ahaan, haddii la doonayo in la dhiso midka ugu webiga dheer adduunka, heerka ugu horreeya ayaa u muuqda mid lagu kalsoonaan karo. Si kastaba ha noqotee, sayniska ayaa qiraya labadaba.
Sidaa darteed, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ah inaan kuu fidino dhammaan xogta qaraabo u ah labada wabi ee la soo sheegay si aad adigu u samaysan karto fikradaada. Iyo, si lama filaan ah, tan iyo markii aan la macaamilno socdaalka web, waxaan ku tusi doonaa meelaha ugu quruxda badan ee ay soo maraan.
Webiga Niil, waa webiga ugu dheer adduunka dherer ahaan
Sidaan horey kuugu sheegnay, halka uu ku dhashay wabiga Nile ma cada. Waxaa la ogyahay in sidaas lagu sameeyo tanzania galbeed iyo khubaro badan ayaa asalka u leh harada victoria. Laakiin maadaama biyaha wabiga weyn ay bixiyaan wabiyada, waxaa jira saynisyahano ka helaya isha wabiga Niil. Wabiga Kagera, ugudbinta ugu weyn.
Dhibaatadaani waa mid khuseysa maxaa yeelay, kiiskii ugu horreeyay, webiga weyn ee Afrika wuxuu lahaan lahaa dherer 6650 kiiloomitir. Si kastaba ha noqotee, tan labaad, taasi waa, haddii Kagera loo qaato meeshii dhalashada, way safri lahayd 6853 kiiloomitir.
Si loo dhammeeyo waxyaabaha murugsan, webiga weyn wuxuu leeyahay laba laamood. Ta hore waa wicitaanka Niilka Cad, waddankiisa dhalashada uu noqon lahaa xuumada iyo inay dhex mari doonto gobolka harooyinka waaweyn. Dhinaceeda, kan labaad wuxuu noqon lahaa Niilka Buluuga ah, kaas oo ku dhashay lake tana, ugu weyn ee Itoobiya, oo mara Suudaan inuu ku biiro kan ugu horreeya ee u dhow caasimadda waddankan, Khartuum.
Ugu dambeyntiina, waxay faaruqdaa koonfur-bari ee Badda Dhexe iyada oo sameysa waxa loogu yeero Delta Delta kadib markii ay soo mareen toban wadan. Laakiin marka lagu daro, webiga Afrika wuxuu leeyahay socod ka yar kan Amazon. Tani waxay celcelis ahaan gaarsiisaa Badweynta Atlaantik 200 mitir kuyuub, halka Niilku qaado tiro biyo ah lixdan jeer kayar. Iyo Amazon sidoo kale way ka sii ballaadhan tahay, maaddaama ballaadhkeeda ballaadhan ay gaadhayso kow iyo toban kiilomitir ballac ah.
Dhinaca kale, sidii aan kuu ballan qaadnay, waxaannu kula talin doonnaa qaar ka mid ah meelaha ugu quruxda badan inaad ku booqan karto qarka webiga Niil.
Iyada oo ku dhowaad toddobaatan kun oo kiiloomitir oo laba jibbaaran, waa harada labaad ee adduunka ugu weyn ka dib Superior, in Kanada. Xeebaheeda waxaa ka mid ah seddex quruumood: Tansaaniya, Uganda y Kenya magaceedana ka helay boqoradda Guusha England.
Kordhinta noocaas ah, waa macquul in ay leedahay yaabab dabiici ah. Si aan tusaale kuu siino, waan xusi doonnaa Murchison Falls ama Kabalega, oo laga leeyahay dalka Ugandha isla markaana abuuray beerta nasashada. Runtii iyagu waa seddex biyo-dhacyo waaweyn oo gaaraya ugu badnaan afartan iyo saddex mitir oo dherer ah.
In kasta oo aysan ahayn taallo dabiici ah, waxaan ka hadlaynaa biyo-xireenkan sababta oo ah muhiimadda ay caasimadda u leedahay kanaalka Nile. sare iyo hoose. Laakiin tan ugu cajaa'ibka badan waa tii ugu horreysay, oo la dhisay XNUMX-meeyadii.
Waa shaqo weyn oo injineernimo ah oo la fuliyay si looga hortago in webigu qulqulo. Baaxaddiisu aad u weyn tahay ayaa fikrad kaa siin doonta xaqiiqda ah inay cabirayso ku dhowaad afar kiilomitir oo dherer ah y ku dhowaad boqol iyo toban dhaadheer. Marka laga eego dhumucda salka, waa ku dhowaad kiiloo mitir.
Si aysan u lumin, taalooyin badan oo ku yaalay aagga waa in la guuraa ka hor inta aan shaqada la qaban. Waxaa ka mid ah Macbadka Debod, loo wareejiyay Madrid. Laakiin sidoo kale kuwii Ramses II iyo Dendur, oo loo kala qaaday magaalooyinka Khartoum iyo New York.
Magaalada qadiimiga ah ee Meroe
Waxay ku taallaa Suudaan, wuxuu ahaa caasimada Boqortooyada Kush, mid ka mid ah labadii kii hore ka dhigay Nubia. Jiritaankeedu wuxuu soo bilaabmay qarnigii 350aad ee miilaadiga, laakiin waxaa la baabi’iyay qiyaastii XNUMX miilaadiga. Si kastaba ha noqotee, haraaga darbiga waa la keydiyay, the qasriga boqortooyada, macbudka weyn ee Amun iyo caruurta kale ee yar. Maaha wacdaro sida aagagga Masar ee aan ka hadlayno xiga, laakiin waxay leedahay a qiimaha qadiimiga ah.
Sidoo kale hareeraha webiga Niil waxaa ku yaal qaar ka mid ah taallooyinka ugu muhiimsan adduunka: kuwii hore ee Masar. Kuwaas waxaa ka mid ah, kuwa ku yaal Dooxada Boqortooyada oo istaaga, kuwaas oo iyaguna la mid ah Archaic thebes go'an lagu dhawaaqay Dhaxalka aduunka.
Dooxadu waxay ka kooban tahay qabriyada fircoonnadii kala duwanaa ee Boqortooyada Cusub oo aad ugu dhow iyaga ayaa ah kuwo aad u qurux badan macbudyada Luxor iyo Karnak, iyo sidoo kale waxa loogu yeero Dooxada boqorada, iyadoo qabriyadii kuwan laga qoday dhagaxyada. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah shirarkii ugu waaweynaa ee lagu soo rogo bangiyada Niil, halkaas oo aad ku arki karto waxyaabo badan oo yaab leh, laakiin hadda waxaan diirada saari doonaa Amazon.
Amazon, waa webiga ugu weyn adduunka ee socodka biyaha
Dhiniciisa, Amazon waxyar ayuu ka gaabanyahay wabiga Nile.Laakiin dhererkiisa sidoo kale muran baa ka taagan. Sawir qaadayaasha hydrographic-ka laftoodu kuma raacsana.
Sida laga soo xigtay Adeegga Qaranka ee Qaranka Mareykanka, Amazon waxay leedahay dherer ah 6400 kiiloomitir. Si kastaba ha noqotee, Machadka Juquraafiga iyo Tirakoobka ee reer Brazil ayaa daabacay daraasad dhowr sano ka hor ay ku sheegeen in wabigan weyn uu ka soo bilowdo koonfurta Peru oo uusan ka soo jeedin woqooyiga, sida lagu qiyaasey ilaa waqtigaas. Iyadoo taas, Amazon dhererkeedu wuxuu gaadhay Niilka. Laakiin khilaafku wali wuu nool yahay saynisyahannadiina badankood wali waxay tixgelinayaan webiga Afrika inuu sii dheeraado.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii dherer ahaan loo qaadi lahaa socodka ama balaca cabir ahaan, Amazon ayaa markale ka adkaatay webiga Nile.Kii hore, sidaan sheegnay, webiga weyn ee Koonfurta Ameerika wuxuu ku qulqulaa badweynta Atlantik celcelis ahaan 200 mitir cubic ilbiriqsi. Iyo, oo ku saabsan ballaca, qiyaasta Amazon ee qaybaheeda waaweyn 11 kiiloomitir. Si kale haddii loo dhigo, tan kale si dhib yar ayaa looga arkaa hal xeeb.
Dhanka kale, sidii aan ku sameynay webiga Nile, waxaan kuu soo bandhigeynaa qaar ka mid ah meelaha ugu quruxda badan inaad ku arki karto dooxada webiga weyn ee Koonfurta Ameerika.
Xaddiga ballaaran ee biyaha uu geeyo webiga ayaa inta badan mas'uul ka ah xaqiiqda ah in bangiyadooda ay hoy u yihiin keymaha ugu weyn adduunka ee sida saxda ah loogu yeero. Amazon. Waa sambabo run ah oo loogu talagalay Dhulka oo leh a qiimaha deegaanka aan la soo koobi karin labadaba sababtan iyo sababta oo ah waxay leedahay hanti aad u tiro badan oo ah dhir iyo xayawaan.
In kasta oo ay ka mid tahay Toddoba Layaab Oo Dabiici Ah Ee DunidaNasiib darrose, nidaamka deegaanka ee Amazon wuxuu ku jiray qatar muddo sannado ah howlo badan oo ka mid ah dhir jaridda iyo sababo kale awgood.
Waa magaalada ugu weyn dhammaan Peruvian Amazon waxayna diyaar u tahay inay qaabisho dadka safarka ah. Nasiib darrose, waxay ka mid ahayd meelihii ugu muhiimsanaa ee wicitaanku ka socday Qandhada qandhada taas oo burburisay inta badan gobolka.
Dhexdeeda waad ku booqan kartaa quruxda badan Kaniisad, yaab-yaqaanka Gothic-ka oo la dhisay bilowgii qarnigii XNUMX-aad. Iyo waliba kan Casa del Fierro, Cohen iyo Moreyiyo waliba kuwii hore Hoteelka Palace, Cajiib qaabka farshaxanka deco. Ku Fagaaraha Weyn, halkaas oo aad ka arki karto Obelisk-ka geesiyaasha.
Manaus, caasimada Amazonas
Waxaan nafteena ugu ogolaaneynaa ciyaartaan erayada inkasta oo magaaladan, si macquul ah, aysan ahayn caasimada keymaha Amazon guud ahaan, laakiin waa gobolka Brazil ee Amazon. Xaqiiqdii, waxay ku taal bartamaha hawdka magaceeduna waa maamuus ay aasaasayaashii Bortuqiisku ay siiyeen Manaus Indians, oo asal ahaan ka soo jeeda.
Xarunteeda neerfaha waa Fagaaraha San Sebastian, meeye qaali iyo wax saarid Tiyaatarka Amazonas. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad booqato xarunta taariikhiga ah, oo leh guryo badan oo sharaf leh oo la dhisay xilligii Rubber Rush; ah Suuqa Adolpho Lisbon, oo leh in ka badan boqol sano oo taariikh ah, iyo Xarunta Dhaqanka ee dadka Amazon, Matxaf qurux badan oo ku saabsan qabiilooyinka ku noolaa hawdka weyn ilaa waqtiyadii hore.
Tiyaatarka Amazonas, ee Manaus
Belém, albaabka laga galo Amazon
Magaaladan reer Brazil waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn albaabada laga galo Amazon, maadaama ay ku taal webiga afkiisa laftiisa. Sidoo kale waa caasimada gobolka Brazil ee Pará waxayna leedahay magaalo duug ah oo ay ka buuxaan daaraha waaweyn iyo matxafyo.
Waxay sidoo kale iftiiminayaan Catedral Metropolitana, jawharad classicist ah, iyo Qalcaddii Rabbiga Santo Cristo de Presépio de Belém. Intaa waxaa dheer, the Suuqa Ver-o-Peso kuu oggolaan doonaa inaad naftaada quusin nolol maalmeedka magaalada iyo Margal de las Garzas Park Waxay ku tusinaysaa boqolaal nooc oo shimbiraha biyaha ku jira ah. Ugu dambeyntii, ha iloobin inaad booqato Rodrígues Alves Botanical Garden, oo u waxyooday Bois de Boulogne of Paris qaabeynta, laakiin leh noocyada dhirta ubaxyada ah.
Gabagabadii iyo ku noqoshada muranka ku saabsan Wabiga ugu dheer adduunka, waxaan kuu sheegi doonaa taas, dherer ahaan waa Niil. Laakiin, mug ahaan, Amazon ayaa la wareegi doonta cinwaanka. Si kastaba ha noqotee, labaduba waxay ku leeyihiin bangiyadooda yaabab badan inuu ku siiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Wabiga ugu dheer adduunka